Kpọtụrụ FXCC | Isi Ụlọ Ọrụ na Ụlọ Ọrụ Mba Nile
Nkwado ahia. Anyị nọ ebe a iji nyere gị aka!
Njikere inyere gị aka na nzọụkwụ ọ bụla nke ahụmịhe azụmahịa gị, 24h
nkwado ndị ahịa dị iche iche na ndị nchịkọta Akaụntụ Njikwa.
Oge na-arụ ọrụ:
Nwere ajụjụ? Anyị nọ ebe a iji nyere gị aka.
Ebumnuche maka ịkpọtụrụ anyị Nkwenye akaụntụ Ajụjụ ntanetị Ajụjụ ịzụ ahịa Usoro Nka nkwụnye ego ndọrọ ego Ntọala akaụntụ Akaụntụ n'ọkwá General Info
Na-ejikọta na anyị!